प्रभावकारी ट्विटर मार्केटिंगका लागि ट्विटर सल्लाहहरू
बुधबार, जुन 23, 2010 आइतबार, अक्टोबर 19, 2014 एडम सानो
यस प्रस्तुतिमा स्लाइडशेयरमा २,24,000,००० भन्दा बढी दृश्यहरू छन् र जानकारीको अविश्वसनीय मात्रा छ ... सबै १ characters० वर्ण वा सोभन्दा कमको स्निपेटहरूमा प्याक गरियो। तपाईले केहि लेखकहरू फेला पार्नुहुनेछ Martech Zone त्यहाँ पनि!
यी टिप्सको विविधता र समृद्धि एक संचार माध्यमको रूपमा ट्विटरको शक्तिको वास्तविक प्रमाण हो। यस माध्यमको शक्तिलाई हल्का नपार्नुहोस्। यहाँ प्रस्तुतीकरण छ - १ Twitter० ट्विटर सल्लाह:
यदि तपाईं ट्विटर मार्केटिंगले कसरी तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्न सक्दछ भन्नेमा थप जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यसको प्रतिलिपि लिनुहोस् ट्विटर मार्केटिंग डमीहरूको लागि। सम्पूर्ण डम्मी श्रृ series्खलाहरू जस्तै यस पुस्तकले ट्विटरलाई सञ्चार माध्यमको रूपमा प्रभावकारिताका लागि लाभदायक बनाउन दुवै शुरुआती र उन्नत विधिहरू समेट्छ।
पुनश्च: काइलले वास्तवमै यो पोष्ट लेखेनन्, डगले गरे। काइल एक व्यस्त मान्छे हो तर डग यो निश्चित गर्न चाहन्थे कि उसले ध्यान प्राप्त गर्दछ जुन उसले पाएको ध्यान एक महान प्रस्तुतीकरण र एक शानदार पुस्तकको लागि हो।
टैग: काइल लेसीtwitterट्विटर सुझावहरू
चिच्याउनु भएकोमा धन्यवाद! म यसलाई धेरै कदर गर्छु।
मलाई याद छ जब तपाईं पछिल्लो बर्ष यी सुझावहरूको लागि बिन्ती गर्नुभयो। जबकि ती मध्ये धेरैले होल्ड गरे, मलाई लाग्छ कि तपाईंले यस बर्ष टिप्सको नयाँ ब्याच प्राप्त गर्नुहुनेछ।
जुन २,, २०१ बिहान :30:२२ बिहान
मैले पछ्याउनु पर्ने रुचिपूर्ण नयाँ व्यक्तिको सम्पूर्ण समूह भेटियो